Jalbo Diimeed qofkey hayso Jamecadii Bardheer ayaa la geynaa. Jani qofki Xaayo Jowhar ayaa la geynaa. Jahwarer qofkii hayana Bosaso ayaa lageyna.Jacel Qofkii xaya Janaale ayaa lageyna. Jamaal badan Waliya aan jeclana Abaar ayeey la jiiftaa Jaliilow Ilahow Juucan naga bihi.
Shalanbood anigo ka imid Jiinka Wabiga Janale taagan Waliyaadi waydiyow ,waana Wardiyow ayaa shimbir Guumow ii Warmi:
Widaayow Mayoow fiiri: Shimbirihi wey qexeen wey go’een.Geedihi wey cirib tirmeen waa la dhuxuley.Bacadikii wuu fidey, Dhulkii wuuw rugmadi. Noolihi : geel, lo, Ari iyo waxii lamid ah wey dhamaadeyn.
Dadkiin, Wayeel,caruur iyo lucafadii wey socdeen, inta soo hartina nolol aan geeri dhaamin ayey ku noolyihin.
Jiilkii Waliya ay dhasheyna Jidah, Jineva iyo Jikakow ayaa laga shegayey in ay joogaan:
Dadkii , Duuyadii, Dugaagi iyo duurkiba waxaa jiha kasta ka fadhiistey:
Abaar, Cudur, Gaajo ,Jahli iyo Duul kale oo Dool ah Magac u samestey Waax iyo Waadi i.w.m .
Shimbiriki asagoo a korbeysan ayuu afbuuxa ku yiri:
Ummadey:Salaadhinta, Duubabka, Odayaasha, Haweynka,Siyaasiyiinta , Urura Bulshada iyo Bulshaweynta Digimirfle meel kasta aduunka ay joogtan waa badbaadisaan Ummadan iyo beyadaan ,Jiritaankeena wuxuu ku xiranyahey badbada Ummadeyna, Haadaan Umaadiina Hadeer laga soo gaarin:(Xaalku waa Alif Wax male)
Qurba Joogta Digilmirfle idinka ayaan indhaha la idinku hayaa, is aruursada , Wadamada aad joogtaan Dowladhooda u sheega dhibatda Dadkiina iyo Ummada Somaliyeed hadeer xeysato.(Kulamey-Kulamey-Caruurey- muuradkeenaa -xelaane -ogaadaay).
Qofkasto Muslim waxaa ka codsanya hal maal in in uu Soomo si EBBE Ummdeena Musibada uga dul qaado.
Qofkasta Qurbaha Joogo inta uu owood Gudiga abaarha loo sameyey uu diro.
Tusaalo ahaan , caruur adiga aad dhashey oo Somalia qaajo u dhimanaayo.
Adigu maxaad u qabad leheed caruurtaas? Wardiyee widaayow, Waliyaadi ayaa warshee weydiiye, Waxiidkii ALLE iyaa wahashadee,
War kheer leh ayaa Qurbajoogta Digil iyo Mirfle ka sugee.
Waliyaadii ayaa Wadnoogey an bukee , Widaayow wal iin Sheeg i waanodoo fade!!!!!!!
Gobolka Shebeelada hoose